Netherlands na-anụrịrị ozi ụgbọ njem ọha na Apple Maps | Esi m mac
Gbaso parsimony ha mgbe ọ bụla gbasara ịgbasawanye ọrụ ndị a na-enye site na Apple Maps, ụmụ okorobịa Cupertino ka gbakwunyere Netherlands dị ka mba ọzọ nke na-egosi ozi gbasara njem ọha na eze site na map Apple, site na Yabụ ọ bụrụ na anyị gaa mba ahụ, anyị agaghị kwesiri iji ugbo ala gbazitere, Uber ma obu ihe yiri ya iji bia. Oge nke a Apple etinyewo ozi niile metụtara ọdụ niile site na ebe anyị nwere ike iburu ụgbọ oloko ma ọ bụ ụgbọ ala iji gaa ebe anyị na-aga, agbanyeghị na ugbu a ozi ndụ nke ụgbọ njem abụọ adịbeghị.
N'oge anyị na-amaghị mgbe ọ ga-amalite inye ihe ọmụma dị ndụ banyere njem mana dịka ụfọdụ asịrị metụtara Apple, nwere ike ime ya obere oge ememme WWDC, nke ga-amalite na June 5 nke ahụ ga-abụ egbe mbido maka ụlọ ọrụ Cupertino iji malite betas mbụ nke sistemụ arụmọrụ niile ọ na-arụ ọrụ na afọ gara aga. N’ọnwa gara aga, obodo Adelaide (Australia), Paris (France) na Singapore natara ozi a bara uru maka ndị ọrụ niile gara ma ọ bụ bi na mba ahụ.
Nzọụkwụ mbụ nke Apple Maps na ozi gbasara njem ọha na eze pụtara na iOS 6, afọ 2012, mgbe ụmụ Cupertino tufuru Google Maps ngwa amaala na inye ohere maka ọrụ njiri mara, ọrụ maapụ nke ha bidoro ọsọ ọsọ ma na-agba ọsọ. N'oge na-adịghị anya mgbe ọ malitere, Apple kwụsịrị ịnye ozi a iji tinye ya ọzọ na mwepụta nke iOS 9. Kemgbe ugbu a, obere obere na ọtụtụ obodo na-etinye ụdị ozi a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Netherlands na-anụrịrị ozi ụgbọ njem ọha na Apple Maps
MateBook X, laptọọpụ ọhụrụ nke Huawei bụ onye ọrụ ugbu a ma yie nke dị ka nke anyị maara ...
Nokia na Apple ghọrọ ndị mmekọ maka nkwekọrịta